Akhriso: Kulan Galkacyo Ku Dhexmaray Xildhibaanno Baarlamaanka Federaalka Ah iyo Bulshada Galkacyo – Goobjoog News
Wafdigii xildhibaanada ahaa ee gaaray magaalada Gaalkacyo maalinimadii Jimcada, ayaa kulankoodii ugu horeeyay waxa ay la qaateen odayaasha dhaqanka degmada Gaalkacyo ee Galmudug.
Kulanka ayaa ugu horeyn la isku warsaday u jeedada wafdiga iyo guud ahaan xaalada iyo sida looga xun yahay wixii ka dhacay Gaalkacyo, oo imaashaha wafdiga uu salka ku haayo xal ka gaarista arritaas.
kulanka oo labo waji lahaa ayaa xildhibaanadu midka hore waxa ay la qaateen odayaasha dhaqanka, ayagoo si guud ugala hadlay wixii dhacay, kulanka kale ayaa waxaa wada qaatay xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka maleeshiyadii dhibka geystay.
Wafdiga xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka ka socda ee Gaalkacyo ku sugan ayaa hor udhac waxa u ah wafdi kale oo magaalada ku soo wajahan, si xal looga gaaro dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada ee dadka rayidka ah lagu laayay.
Magaalada Gaalkacyo sidoo kale waxaa la filayaa in ay gaaraan wafdi xildhibaano xaqiiqo raadin ah, kuwaas oo dhawaan uu magacaabay gudoonka golaha shacabka.